दाङका १४ गाविसमा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा | गृहपृष्ठ
Home दाङका १४ गाविसमा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा
गत शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा छुटेका बालबालिकालाई लक्षित गरी दाङका १४ गाविसमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । जिल्लाका विपन्न, अपाङ्गता भएका, दलित एवम् अति सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण तयार पार्न सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले बताएको छ । शिक्षा विभागको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका १४ ओटा गाविस र तुलसीपुर नगरपालिकाको एउटा वडामा यही साउनदेखि निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा शुरू गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जितबहादुर शाहले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार यी गाविस र नगरपालिकामा रहेका १५ ओटा स्रोतकेन्द्रका एक/एक गाविसलाई समेटेर निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
निःशुल्क शिक्षा सञ्चालन हुने गाविसहरूमा गोबरडिहा, पञ्चकुले, शान्तिनगर, हापुर, डुरुवालगायत रहेका छन् । त्यस्तै टरिगाउँ, लक्ष्मीपुर र तुलसीपुर नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पनि निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका कक्षा सञ्चालन हुनेछन् । हाल सो गाविस र नगरपालिकामा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्ने कार्य भइरहेको छ । भदौबाट शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गरी पढाइ शुरू गर्ने शिक्षा कार्यालयले बताएको छ ।
सो अभियान सञ्चालनका लागि प्रत्येक गाविसमा रू. १ लाख १४ हजार लगानी गरिनेछ । तर, यो अभियान नौलो भने होइन । शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन २०५८ अनुसार २०५९ मा नियमावली बनाई सबै गाउँ विकास समितिहरूमा गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि दाङमा ११ वर्षपछि मात्रै यो काम शुरू गरिएको हो । ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नारालाई अगाडि सार्दै पढाइबाट वञ्चित जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई यो अभियानले विद्यालय प्रवेश गराउन सघाउने जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले बताएको छ । दाङमा अझै १३ हजार बालबालिका विभिन्न कारणले विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् ।